गर्भवती महिलामा कोरोना पुष्टि भएपछि भेरी अस्पतालको प्रसूति वार्ड सिल – Khabar PatrikaNp
नेपालगञ्ज, २४ साउन । बाँकेको नेपालगञ्ज भेरी अस्पतालमा उपचाररत महिलामा कोरोना पुष्टि भएपछि भेरी अस्पतालको प्रसुति वार्ड सिल गरिएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ की २८ गर्भवती महिलामा शनिवार कोरोना पुष्टि भएपछि अस्पतालको प्रसुति वार्ड सिल गरिएको हो ।
तीन दिनअघि लिइएको स्वाबको रिपोर्ट शनिबार पोजेटिभ आएपछि प्रसूति वार्ड सिल गर्नुपरेको मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डाक्टर प्रकाश थापाले बताए । बिहीबार शल्यक्रिया गरेर बच्चा निकाल्ने तयारी भइरहेको समयमा उक्त महिलालाई अचानक ज्वरो आएपछि कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि थ्रोट स्वाब निकालिएको थियो ।
उक्त महिला अस्पतालमा बसेकी हुनाले अन्यलाई समेत संक्रमण फैलिएको आशंका गरिएको हुनाले प्रसूति वार्ड सेनिटाइज गर्नका लागि सिल गरिएको डा. थापाले बताए । ती महिलालाई थप उपचारका लागि नेपालगन्ज शिक्षण अस्पताल कोहलपुर लगिएको छ । भगतराम थारु, न्युज २४
यस्तै काठमाडौंमा थपिए ६२ नयाँ संक्रमित , कुन ठाउँमा कति ?
काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा ६२ संक्रमित फेला परेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ६२ संक्रमित थपिएका हुन् ।
जसमध्ये काठमााडौंमा मात्र ५६ संक्रमित थपिएका छन् भने ललितपुर र भक्तपुरमा ३/३ संक्रमित थपिएका छन् । योसंगै काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितको संख्या एक हजार ४४ पुगेको छ ।
अद्यावधिक विवरण अनुसार शनिबार नेपालमा ३७८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिंगमा देशभरका बिभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परिक्षणमा ३७८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा ३७८ जना नयाँ संक्रमित भेटिएका मन्त्रालयका प्रबक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए । यो संगै नेपालमा अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या २२ हजार ५ सय ९२ पुगकाे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बताएकाे छ ।
पछिल्लो २४ घन्टामा ७ हजार ७८८ जनाको पिसिआर परिक्षण गरिएको छ । हाल १० हजार ७९२ जना क्वारेन्टाइन रहेका छन् भने ४९९ डिस्चार्ज भएका छन् , यो संगै डिस्चार्ज १६ हजार ३१३ पुगेको छ ।
मन्त्रालयले अनिबार्य काम बाहेक बाहिर ननिस्किन सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
Prevसंक्रमित होम आइसोलेसनमा : स्वास्थ्यकर्मीलाई दैनिक १० हजार भत्ता
Nextजुन घरमा गरिन्छ यी ४ काम, सधैँ हुन्छ लक्ष्मीको वास
नेपाली जनता अविभावक विहीन, टुहुरा बनेको पीडाबोध : पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह
पाथिभरा माताको दर्शन गरि आजको राशिफल हेर्नुहोस : वि.सं.२०७७ साल कार्तिक २७ गते । बिहीबार । ईश्वी सन् २०२० नोभेम्बर १२ तारिख
चुत्रोको यस्तो छ अचुक फाइदाहरु ! आैषधिले भन्दा छिटाे गर्छ काम
सर्लाहीमा प्रह,रीमाथी नि,र्मम आ,क्रमण , डीएसपीसहित ४० बढी घा,इते..